Chii chaizvo chinonzi denda? | Kuongorora - Hutano Dzidzo, Nhau | Chikunguru 2021
Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Nhau Nhau, Wellness Kambani, Info Info Wellness Info Info, Nhau Zvinodhaka Info Nharaunda, Kambani Checkout Dhinda Nharaunda, Wellness Nhau Kambani, Iyo Checkout Dzidzo Yehutano Zvipfuwo
Kuru >> Hutano Dzidzo, Nhau >> Chii chaizvo chinonzi denda?
Chii chaizvo chinonzi denda?
Nhau Hutano Utano Hwakatsanangurwa
CORONAVIRUS UPDATE: Sezvo nyanzvi dzichidzidza zvakawanda nezve novel coronavirus, nhau uye ruzivo rwunochinja. Nezvezvazvino padenda re COVID-19, ndapota shanyira iyo Nzvimbo dzeDziviriro Kudzora uye Kudzivirira .
Denda ishoko rinotyisa. Bvisa chete mavara mashoma uye unosara nekuvhunduka-tsananguro inokodzera kuti yakawanda sei nyika iri kunzwa nezve nyowani coronavirus izvo zvakabuda mukupera kwegore rapfuura muWuhan, China. Utachiona hutsva, hunyanzvi hunonzi SARS-CoV-2, hwave kutyisidzira hutano hwepasirese, huchitsvaira mumakondinendi uye kuburikidza nenharaunda. Inokonzera chirwere chekufema chinonzi coronavirus chirwere 2019, kana COVID-19.
Chii chinonzi denda?
TO denda ndiko kupararira kwakapararira kwechirwere chitsva chinoyambuka miganhu nemakungwa, inodaro World Health Organisation (WHO). Pandemics inokonzerwa nemavhairasi vanhu vasati vasangana nawo (mazhinji anobuda kubva kumhuka) kana mabhakitiriya anoshingirira mishonga inorwisa mabhakitiriya. Pandemics haifanire nehunyanzvi kusvika kumakona ese epasirese (kunyangwe vazhinji vachidaro, nekuda kwekufamba kwenyika). Ivo ita inokanganisa vanhu vazhinji uye inowanzo kuwanikwa pamakondinendi maviri kana anopfuura.
Coronaviruses hachisi chinhu chitsva-kutaura zvazviri, mamwe anokonzera dzihwa. Asi, inoverengeka kushungurudzika kwakonzera kuputika kwepasirese, kutapura vanhu vanopfuura zviuru zana munyika zhinji, kubva kuIran kuenda kuItari kuenda kuIndia. Kana iwe uchifunga kuti zvinonzwika sedenda, ungadai usiri wega.
Musi waMarch 11, 2020, iyo WHO yakazivisa COVID-19 zviri pamutemo denda.
Denda vs. denda
Nepo zvese denda uye denda zvichisanganisira vanhu vazhinji, pane mutsauko. Denda rinoitika apo chirwere chinotapukira (semuenzaniso, furuwenza, HIV, kana Ebola) chinopararira nekukurumidza uye dzimwe nguva nekukasira kuvanhu vazhinji - kupfuura zvingangotarisirwa panguva iyoyo uye munzvimbo iyoyo, inotsanangura Sangano revanyanzvi muInfection Control uye Epidemiology . Denda, kune rumwe rutivi, imhando yedenda rakakurisa, asi nemisiyano. Kana ichienzaniswa nehosha, denda:
maitiro ekurapa hutachiona hutachiona zvakasikwa
Inobata huwandu hwakawanda hwevanhu
Iva nekupararira kwepasirese
Kukonzera kufa kwakawanda
Sanganisira hutachiona hutsva kana mabhakitiriya asingadziviri mabhakitiriya
Uye nepo zvinhu zvakaita segomarara, kufutisa, uye kunyangwe kushungurudzwa kweopioid dzinowanzonzi madenda, nehunyanzvi hadzisi sezvo dzisiri kukonzerwa nezvirwere.
Matenda akapararira kwemazana emakore — uye mazana emakore. Rimwe rematenda akakurumbira raive denda reBubonic (kana kuti Black Death), rakaitika muMiddle Ages uye rakauraya mamirioni. Pandemics kubva muzana ramakumi maviri emakore yakanyanya kutenderedza Utachiona hutachiona inosanganisira furuwenza A uye inosanganisira:
Furuu yeSpain ya1918, yakauraya vanhu zviuru makumi mashanu pasirese
Iyo Asia furuwenza ya1957
Iyo Hong Kong furuwenza ya1968
Inozivikanwa 21st century pandemics anosanganisira:
SARS (yakanyanya kuoma kufema chirwere) : Denda iri, rakakonzerwa neimwe coronavirus, rakatanga muChina muna 2002 ndokuguma rabata vanhu vanopfuura zviuru zvisere kuAsia, Europe, neNorth neSouth America. MuUnited States, iyo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) inoti, 115 vanhu vanobva ku29 states vairwara neSARS.
H1N1 hutachiona : Iyi furuwenza hutachiona- inozivikanwawo sekuti swine flu - yakatanga kuoneka muna 2009 uye yakanga isati yamboonekwa mumhuka kana kuvanhu. Kubva Kubvumbi 2009 kusvika Kubvumbi 2010, iyo CDC inofungidzira 284,000 vanhu pasirese vakafa neH1N1. H1N1 furuwenza denda ndiyo yakanyanya kutaurwa nefuruwenza denda rinobata United States.
HIV / AIDS idenda riri kuenderera mberi. Muna 2018, vanhu vangangosvika mamirioni makumi matatu nemasere pasirese vaigara neHIV / AIDS.
Ko coronavirus idenda here?
Kubva munaKurume 2020, WHO yakaratidza COVID-19 sedenda repasirese. Icho chinotonyanya kunetsa kupfuura hutachiona hwechirwere, hazvo, izvo zvinokonzeresa kupararira kwechirwere uye dzimwe nguva kufa asi (kwete mwaka uno) mhedzisiro yehutachiona huturu.
COVID-19 inoita kunge ine huturu [kupfuura furuwenza], inopararira zviri nyore, uye inonetsa kuva nayo, nekuti kutapurirana kunoitika pakati pevanhu vane chirwere chisina hunyoro kana vasina, zvinotsananguraJana Shaw, MD, purofesa wevanoona nezvezvirwere zvevana paUpstate Golisano Children's Hospital muSyracuse, New York.
zvakachengeteka here kutora aleve uchiri nepamuviri
Maitiro ekurarama nedenda
Iko hakuna yakanaka nzira yekufungidzira kuti hutachiona hwenhau senge SARS-CoV-2 ingatambe sei. Pandemics inogona kutora kubva pamwedzi kusvika pamakore. Kuputika kweSARS, semuenzaniso, kwaive mumwedzi mitanhatu. HIV / AIDS ichiri kuenderera mberi. Sekureva kwemishumo yenhau, nyaya dze COVID-19 kuChina nekuSouth Korea dzinoita sedziri kudzikira kunyangwe ichikwidza kumusoro mune mamwe mativi epasi. Vamwe vane tarisiro yekuti hutachiona hunogona kupera, sezvinoita dzihwa uye mamwe mavhairasi, sezvo kunodziya mamiriro ekunze, asi nyanzvi dzakawanda dzezvehutano dzinoyambira kuti pane zvakawanda zvisingazivikanwe nehutachiona hutsva, uye zvinotora zvakakomba uye zvinowirirana matanho ehutano eruzhinji. (uye kwete mamiriro ekunze) kuti inyatso kuve nayo.
Uye iyi nyowani coronavirus kuputika ingave irimo sei? Hurumende dzinoshanda kurwisa denda nekupa kwega (Italy ikozvino yave kukiyiwa), ichipa bvunzo dzekuongorora kuti uone avo vane hutachiona, vanodzora kufamba uye kugadzira majekiseni pazvinogoneka. Asi izvo zvese zvinotora nguva nekushandira pamwe. Chii chaungaite kuti ubatsire Zvidzivirire kubva pane ino yeruzivo coronavirus panguva ino?
COVID-19 chirwere chinopararira zvakanyanya kuita furuwenza nezvimwe zvirwere zvinotapuriranwa zvekufema — kuburikidza nemadonhwe ane vanhu vane hutachiona vanoregedza pavanosvota kana kukosora. Iyo CDC inokurudzira:
Kugara pamba kana uchirwara uye uchidzivirira kufamba kwese kusiri-kwakakosha.
Kudzivisa kusangana kwepedyo nevanhu pazvinogoneka (vatano vezvehutano vanokurudzira kuramba uchidzoka kumashure kana matanhatu tsoka).
Kuchengeta maoko kubva pamhino dzako, muromo, uye maziso.
Kuhotsira kana kukosora kuita munyama (uye wozoikanda kure) kana ruoko kana chinyama chisipo.
Kugeza maoko ako kazhinji nesipo nemvura kwemaminitsi makumi maviri. Izvi zvinonyanya kukosha mushure mekushandisa imba yekugezera, usati wadya, kana mushure mekuhotsira kana kukosora. Shandisa sanitizer yemaoko neinenge 60% doro kana sipo nemvura zvisipo.
Pukuta nzvimbo dzakaomarara, dzakaita semakomendi, mawoko emikova, nezvimwewo, zuva nezuva. ICDC inokurudzira kushandisa nguva dzose sipo yemvura nemvura uyezve mushonga unouraya utachiona. Iyo Nzvimbo yeBiocide Chemistries ine runyorwa rwezvigadzirwa zvinogona kunyatso kurwisa coronavirus.
Pfeka chifukidzo kumeso kana uchienda panze uye uchitenderedza vamwe.
Izvo zvirinani iwe uri mukudzivirira iwo madonhwe, zvirinani iwe unenge uri mukudzivirira hutachiona.
Dzidza maitiro ekuyera mushonga wemvura nenzira kwayo-zvakakosha kupfuura zvaunofunga
chii chandingatora kunorutsa nekurutsa ndichiri nepamuviri
chemo inodhura zvakadii neinishuwarenzi
imhando ipi yefuruu iri kutenderera
ndinofanira kutora rinhi b piritsi
inotora nguva yakareba sei 800mg yeibuprofen
zvinoda marii kuita furuu